Oduu Gara Garaa – Fulbaana 24, 2017 |
Warra Oromummaan onnee irratii daraaree dhageeffadha
Konkolaataa wal harkisaa (Tasabiin)warra tigiree Shukkaara guuraa jira. Dhufee asii(Najoo;Waarshaa Dhidheessaa) Naqamtee fi Beddellee Shukkaarri jiru #makkalakiyaan kuntaala kuma kudhan (10,000)bitanii fe’anii guuraa jiru.Akka biyyaatti shukkaarri jiru isaan tasaabii fidanii guurrachaa jiru. Asiimmoo shukkaarri birrii 55 dha. Doolaara barbaachaaf jedhanii shukkaaricha biyya alaatti guraa akka jiran qeerroon gabaase.
Ummatni Oromoo Bakka Maratti Diinni Addaan Hinbaanu jedha